Dalka galbeedka Afrika ee Burkina Faso, beeralayda yaryar si joogta ah ula kulmaan abaar daran iyo roobab aan caadi ahayn. Iyadoo bacriminta ciidda hoos loo dhigayo iyadoo la soo saarayo wax soo saarka dalagyada dalagga ee masaggada iyo masago, cunto yaraantu waa caan.
Gayéri, Burkina Faso, oo ah 30-jir beeralay iyo xayawaan xoolo leh oo lagu magacaabo Issouf Odago ayaa go'aansaday inuu gaajo u galo qoyskiisa. Odago waxa uu arkay sida derisku u kordhay wax soo saarkiisa iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka beeraha ee loo yaqaan 'ecological farming techniques' waxaana u soo dhawaaday inuu wax badan ka barto sida uu u maamulayey dhulkiisa, ugu dambeyntii go'aansaday inuu tijaabiyo qayb ka mid ah dalkiisa. Waxa uu ka qayb galay tababarka iyo qalabkii beerta lagu adkeeyay iyada oo loo marayo qalab deyn ah oo ka yimid tuuladiisa.
Mr Odago wuxuu ka faa'iideystay mashruuc la yiraahdo "Farmaajo-hoggaan cusub oo loo yaqaan" Agroecology "oo ah habka loo hormarinayo maareynta nafaqada iyo kaydinta biyaha ee dhulka si loo hagaajiyo amniga cuntada" Groundswell iyo ururka NGO-yada Burkinabe Nourrir Sans Détruire (ANSD), oo ay taageerto Ururka McKnight Foundation. Labada ururba waxay la shaqeeyaan beeralayda Burkina Faso si ay u dhexgalaan dhaqanka beeraleyda ah ee beeraha iyo in ay gacan ka geystaan in beeraleyda deegaanka ay u wareegaan nidaam cunto oo waara oo xasilan.
Mr Odago waa beerka oo kaliya shan hektar. Intaan la fulin farsamooyinkan, wuxuu soo saarey 2.55 kg masagad ah 3.75 ha, 300 kg oo galley ah oo ah 0.5 ha, iyo 200 kg oo sisin ah 1.125 ha. Dhammaadka sanadka 2014, wuxuu arkay koror soo saaridda hadhuudhka 100%, in ka badan 900% kordhinta hadhuudhka, iyo 50% korodhka sisinta.
Wax soosaarka oo kordhay ma ahan oo kaliya Odago si loo siiyo qoyskiisa; wuxuu sidoo kale awooday inuu iibiyo dalagyada iyo abuurka. Wuxuu soo saaray dakhliga dheeraadka ah ee lagu iibiyo dhirta sisinta ee CFA F 60,000 (ama qiyaastii US $ 120), taas oo u siisay isaga oo bixinaya kharashka waxbarashada kharashka dugsiga ee loogu talagalay carruurtiisa iyo kharashka biyaha. Waxa kale oo uu awoodey inuu ballaariyo ganacsigiisa taranka wuxuuna iibsadaa mootada si loo kordhiyo dhaqdhaqaaqa qoyskiisa.
Tan iyo markaas, deriska ka yimid tuulooyinka ku hareeraysan ayaa yimid si ay u booqdaan beertiisa si ay u arkaan natiijooyinka cajiibka ah ee farsamooyinka beeraha ee deegaanka, qaarna waxay weydiisteen taageero uu ku hirgelinayo farsamooyinka la midka ah ee beerahooda. "Natiijooyinka ayaa ka sarreeyay filashadayda," ayuu yiri Odago. "Si adag ayaan u aaminsanahay in aan soo saari karo hadhuudh iyo hadhuudh badan oo ciidda jilicsan."
Guulaha qoyska ee Odago waa hal tusaale oo ka mid ah waxa suurtogalka ah marka ururadu awood u leeyihiin inay dadka si wadajir ah u bartaan oo ay is bartaan.